Xulafada NATO oo ugu baaqay Turkiga joojinta duqeynta Kurdida Siiriya - iftineducation.com
Xulafada NATO oo ugu baaqay Turkiga joojinta duqeynta Kurdida Siiriya
aadan21 / February 16, 2016
iftineducation.com – Qaar kamid ah dalalka isbaheysiga NATO ayaa ugu baaqay wadanka Turkiga oo xubin ka ah ururkaasi inuu joojiyo duqeynta uu labadii maalmood ee lasoo dhaafay ku waday jamhada Kurdida YPG ee ku sugan waqooyiga Siiriya.
Dalka France ayaa ugu danbeeyey xubnaha NATO ee ku baaqay in Turkiga uu hakiyo duqeyntiisa, balse dowlada Turkiga ayaa sheegtay in duqeyntooda ay tahay isdifaac kadib markii ay kooxaha Kurdida ee ku sugan xaduuda Siiriya ay rasaas kusoo rideen gudaha wadankooda.
Dowlada Turkiga ayaa si weyn uga soo horjeeda in Jamhada Kurdida ay awood ku yeelato dhulka Waqooyiga Siiriya ee u dhaw Xaduuda Turkiga, kadib markii kooxda Kurdida ay dhulkaasi ka saareen kooxaha Mucaaridka Siiriya ee kasoo horjeeda Xukuumada Bashar Assad.
Turkiga-Duqeynta-YPG2Ciidamada dowlada Siiriya oo gacan ka helaya Ruushka ayaa xoogooda saaray burburinta kooxaha Sunnida ah, iyagoo aan xiligan weerar ku qaadin Kurdida taasi oo u fududeysay in kooxaha Kurdida qabsadaan dhulkii ay baneeyeen mucaaridka kale. Arrintan ayey dowlada Turkida walaac weyn ka muujineysaa.
Kurdida ayaa dhankooda diiday inay dib uga baxaan dhulka ay qabsadeen ee saaran xaduuda Turkiga iyo Siiriya.
Sidoo kale Kooxda Daacish ayaa la sheegay in xiligan uusan culeys weyn uga imaan ciidamada Dowlada Bashar Assad iyo Ruushka oo hada u muuqda inay diiradooda saareen mucaaridka kale ee qunyar socodka ah ee taageerada ka hela dalalka reer Galbeedka iyo Carabta oo xoogooda ku sugan gobalka Aleppo ee waqooyiga Siiriya.
Maxaa kala haysta naafada Hargeysa iyo qaar ka mid ah darawaliinta magaaladaas?
Doorashada USA: Loolan xoogan oo u dhaxeeya Trump iyo Qoyska reer Bush [Daawo]